Ixabiso leLufthansa liza kunyuka nge-US $ 2.5 yezigidigidi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ixabiso leLufthansa liza kunyuka nge-US $ 2.5 yezigidigidi
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Utyalo mali • iindaba • uthutho
ILufthansa ikhusela ngakumbi ukuthengiswa kwintengiso yenkunzi
IBhodi eLawulayo yeDeutsche Lufthansa AG namhlanje, ngemvume yeBhodi yoLawulo yeNkampani, igqibe kwelokuba isebenzise iCapital C egunyazisiweyo ukunyusa imali enkulu ngamalungelo okubhalisela abanini zabelo kwiNkampani. Imali eyabelwe iNkampani ngoku eyi-1,530,221,624.32 ye-EUR, eyahlulahlulwe yangama-597,742,822 izabelo, iya kunyuswa ngokukhupha i-597,742,822 yexabiso elitsha kwiNkampani.
NgoJuni, eTurboNews ingxelo ingxeloIsicwangciso esenziwe yiJamani Isicwangciso seenqwelo moya saseLufthansa sonyuso lwenkunzi.
Ingeniso epheleleyo kulindeleke ukuba ifikelele kwi-EUR 2,140 yezigidi. Ixabiso lokubhaliselwa le-EUR 3.58 ngeSabelo esitsha lihambelana nesaphulelo sama-39.3% kwi-TERP (ixabiso lamalungelo ex-theoretical).
Umrhumo wobhaliso yi-1: 1. Izabelo ezitsha ziya kunikwa abanini zabelo beNkampani ngexesha lokubhalisela, elilindeleke ukuba liqale ngoSeptemba 22, 2021 kwaye liphele ngo-Okthobha 5, 2021.
Urhwebo lwamalungelo kulindeleke ukuba luqale nge-22 kaSeptemba 2021 luze luphele ngoSeptemba 30, 2021.
Intengiselwano ibhalwe ngokupheleleyo liqela leebhanki ezili-14. Ukongeza, inani leemali kunye neeakhawunti eziphantsi kolawulo lweBlackRock, Inc. zingene kwisivumelwano sokubhalwa phantsi kwe-EUR 300 yezigidi kwaye bazibophelele ekusebenziseni ngokupheleleyo amalungelo abo okubhalisela.
Onke amalungu eBhodi eLawulayo yeNkampani azibophelele ekuthatheni inxaxheba kunyuso lwenkunzi kunye nokusebenzisa onke amalungelo okubhaliswa afunyenwe ngokunxulumene nezabelo zabo ngokupheleleyo.
Ukonyuswa kwemali eyenzelwe ukuba komeleze ubulungisa beQela. Inkampani iyakusebenzisa imali efunyenweyo ukuhlawula iNxaxheba ethe cwaka yeNgxowa-mali yoQinisekiso lwezoqoqosho kwiFederal Republic of Germany (ESF) kwimali eyi-1.5 yeebhiliyoni zeerandi.
Ukongeza, iNkampani inenjongo yokuhlawula ngokupheleleyo i-Silent Participation II kwisixa se-EUR 1 yezigidigidi nge-2021 kwaye ikwanenjongo yokurhoxisa izixa ezingabhalwanga zoThatho-nxaxheba oluThuleyo ngasekupheleni kuka-2021.
I-ESF, ngoku ephethe i-15.94% yemali eyinkunzi yeNkampani, iqale ukurhoxisa inzala yayo kwiNkampani kungaphelanga iinyanga ezintandathu emva kokugqitywa kokunyuswa kwemali eyinkunzi, ukuba i-ESF iyarhuma kulonyuso lwenkunzi. Kule meko, ukwahlulwa kuya kugqitywa kungadlulanga iinyanga ezingama-24 emva kokuvalwa kokunyuswa kwemali eyinkunzi, ngaphandle kokuba iNkampani iyakubuyisa ukuThatha inxaxheba ngokuThuleyo kunye nokuThatha iNxaxheba ngokuThuleyo II njengoko bekucetyiwe.
Isibonelelo sikawonke-wonke sezabelo ezitsha eJamani senziwa ngokukodwa ngokusebenzisa isiseko secandelo lezokhuseleko elamkelweyo yiGerman Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), eya kuthi ifumaneke, phakathi kwezinye, kwi Iwebsite yeQela laseLufthansa . Imvume kulindeleke ukuba inikwe nge-20 kaSeptemba 2021. Akusayi kubakho sibonelelo sikawonke-wonke ngaphandle kweJamani kwaye ingcaciso engenakuphikiswa ayizukuvunywa lelinye iqumrhu elilawulayo.